Curly-vhudzi retriever, inoshamisa furry | Imbwa Nyika
Akamonana-ane vhudzi retriever, inoshamisa furry shamwari
El Akamonana-ane bvudzi retriever Iye murume anodakadza ane furry uyo, pamusoro pekunakidzwa nerudo rwaanowana kubva kumhuri yake, ndomumwe weayo imbwa dzinogona kunyoreswa mumutambo wembwa, senge hunyanzvi kana disc-imbwa.
Kunyangwe saizi yake, ane hunhu hwakanaka zvekuti iye ane chokwadi chekuhwina moyo yenhengo dzese dzemhuri. Saka, isu tichakuzivisa iwe. 🙂
5 Mari yakawanda zvakadii-ine vhudzi retriever puppy inodhura?
Mufananidzo - Pets4homes.com.uk
Iyo yakamonana-bvudzi retriever anotenda kuti anobva kuEngland. Mudzinza weanoparara Chirungu Mvura Spaniels, masetter, uye zvimwe zvinotora senge poodles, pakutanga yaishandiswa kutora mhuka, asi gare gare yakazoperekedza murongi pamabasa ake. Nekudaro, Hondo Yenyika Yekutanga isati yatanga uye mushure mawo muna 1919, yakaenda panguva iyo yaive padanho rekutsakatika zvachose, nekuti murombo akazova mudiwa wevavhimi. Uye chinhu chakaipisisa ndechekuti chakange chisingakwanise kupora kusvika kuma60, apo makopi mazhinji akaunzwa kuUnited States.
Neraki, muna 1979 iyo Curly-Coated Retriever Club yeAmerica yakavambwa, yatove Nhasi tinogona kunakidzwa nekambani yeiyi imbwa inoyevedza nekuda kweFCI (International Canine Federation) uye mamwe masangano senge AKC, CKC uye UKC Gun Imbwa.
Iyo imbwa iri pakati-yakakura-saizi imbwa, ine huremu kubva pa32 kusvika pa36kg uye nehurefu pahunosvava hwe62 kusvika 67cm, hadzi iri yakati rebei uye isingareme kupfuura yemurume. Muviri waro wakasimba, wakareba zvishoma pane kuti wakareba, wakafukidzwa netaundi yemvere dzakasviba dzakasviba kana shava. Musoro waro wakakomberedzwa, uine nzeve dzakarembera uye maziso matema kana shava. Makumbo akafara uye muswe hauna kureba.
Ane hupenyu hunotarisirwa hwe 12 makore.
Kunyangwe uine zvakapfuura sembwa yekuvhima, parizvino imhuka inogona kuchinjika isina matambudziko kugara neimwe mhuri chero bedzi iwe uchimuburitsa kunze kwekufamba uye kurovedza muviri mazuva ese. Kune vamwe vese, anofara kwazvo, akangwara, anoda kunakidzwa uye kuve, dzimwe nguva, akasununguka pasofa pavanomubata.
Zvinokurudzirwa kwazvo kuti iyo yakamonana-bvudzi retriever ipiwe imwe mhando ye cereal yemahara chikafu. Mutengo wekirogiramu uri pakati pe3 ne7 euros, zvinoenderana nechiratidzo, asi mabhenefiti acho anoshamisa: semuenzaniso, iwe uchaona kuti bvudzi rako rinojeka, kana kuti mazino ako anowana hutano hwavo hwepanyama.
Iwe zvakare unofanirwa kutarisa kune zvakanyorwa zvezvinhu zvekubata iwe zvaunovapa, nekuti kana vaine zviyo zvinogona kukonzera kusagadzikana kwechikafu kana kusawirirana.
Utsanana hwakanaka hunodiwa kuti mhuka ive yakanaka. Naizvozvo, iwe unozopihwa bhati yekuchengetera kamwe pamwedzi (kunyangwe kana ukawana tsvina kare, unogona kugeza kare, asi zvirinani kumirira nekuti kana ukageza kakawanda, ganda rako rinozopedzisira rarasikirwa nemafuta. inodzivirira.).
Iyo yakamonana-bvudzi retriever inoda kukweshwa zuva nezuvakunyangwe kaviri muzhizha. Uye zvakare, kamwe chete pamwedzi zvichave zvakafanira kumugezesa nembwa shampoo.
Maziso nenzeve zvichafanirwawo kucheneswa nguva nenguva nemadonhwe emaziso chaiwo.
Iyo yakamonana-ine bvudzi retriever imhuka inoyevedza, asi iine simba riri pakati nepakati. Izvi zvinoreva kuti unoda kurovedza muviri kwechinguva zuva rega rega, sezvo dai aisadaro, aizopedzisira aunganidza simba rakawandisa, izvo zvaizomutungamira kuti ave nehunhu husingade mhuri yake yemunhu. Mimwe yeiyi miitiro isingadiwe inogona kuve, semuenzaniso, kuhukura kwakanyanya, kana kuputsa fenicha.
Saizvozvo, zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti zvinogona kunakidza kumusainira kukirabhu yemitambo, nekuti mariri anogona kushamwaridzana nedzimwe imbwa, kudzidza hunyanzvi hutsva, kurovedza muviri, ... uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, simbisa anosunga newe, munhu waanofarira.
Hip dysplasia uye dumbu torsion zvirwere zviviri zvinogona kukanganisa imbwa yako. Asi kana zviratidzo zvikakurumidza kuonekwa, mhuka ichakwanisa kupora zvachose, kana kupotsa, munguva pfupi.
Zvakare, iwe unofanirwa kuenda naye kun'anga kuti amubaye jekiseni uye kutsemurwa.
Mari yakawanda zvakadii-ine vhudzi retriever puppy inodhura?
Iwe ungade here kugara neyemvere-ane vhudzi retriever? Kana wapindura hongu, chinhu chekutanga chaunofanira kuita kutaura nezvazvo nemhuri yako, nekuti imbwa inofanirwa kugara pamba newe kuti ufare.
Ipapo iwe unofanirwa kutsvaga nzvimbo dzekuberekesa. Ukangowana iyo inokupa chivimbo, tora mukana uye ubvunze zvese zvaunoda uye zvaunoda kuziva. Unogona kubvunza, semuenzaniso, nezvemhuri yembwa, kana vakamboita chirwere chakakomba, vane hunhu hupi, ...
Ehezve, iwe zvakare unofanirwa kuziva mutengo. Kuti ndikupe zano, avhareji mutengo wembwanana werudzi urwu ndewe 1000 euros. Kana yakasimudzwa munzvimbo yakanaka, mhuka ichaunzwa kwauri iine hutano uye nemapepa ese akarongeka.
Iyo yakamonana-ine vhudzi retriever inoshamisa furry. Kana iwe uchida kuona mamwe mafoto, nakidzwa neayo isu atinokusiira iwe pazasi:
Mufananidzo - Flickr / Mattias Agar
Mufananidzo - AKC.org
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Akamonana-ane vhudzi retriever, inoshamisa furry shamwari
Entlebuch Mountain Imbwa, imbwa inoyevedza
Ndeipi kupa puppy kibble?